I-FAQs -I-SHANDONG ZIBO YIHAOJIA IZIXHOBO ZOKUGQIBELA, LTD
Q1. Athini amagama akho okupakisha?
A: Ngokubanzi, sipakisha iimpahla zethu kwiibhokisi ze-OWN BRAND nakwiibhokisi zephepha. Ukuba ubhalisile ngokusemthethweni, sinokuzipakisha iimpahla kwiibhokisi zakho ezinophawu lwentengiso emva kokufumana iileta zesigunyaziso.
Umbuzo Ngaba uyayixhasa i-OEM?
A: Ewe, siyayixhasa i-OEM, ukuveliswa kweemveliso zethu kunye neenkqubo zokuhlolwa komgangatho zihambelana ngokungqongqo nemigangatho yamanye amazwe, kwaye ngokweemfuno zakho zokuvelisa ezona zilayini kunye neemfuno zakho zemveliso ..
Umbuzo. Zithini iimeko zakho zokuhlawula?
A: I-EXW, i-FOB
Umbuzo 5. Njani malunga nexesha lakho lokuhambisa?
A: Ngokubanzi, kuya kuthatha iintsuku ezingama-30 ukuya kuma-60 emva kokufumana intlawulo yakho kwangaphambili. Ixesha lokuhambisa elithile lixhomekeke kwizinto kunye nobungakanani beodolo yakho.
Q6. Ngaba ukuvelisa ngokutsho iisampulu?
Q7.Sifanele ukuhlawula iindleko zesampulu?
A: Ewe, kuxhomekeke, ukuba isampulu yemveliso yasimahla, kodwa umthengi kufuneka anyamekele ukuhlawulwa okucacileyo kwephedi yokuqhekeza; ukuba sicela umthengi ukuba ahlawule isampulu yeendleko, umthengi ngokuqinisekileyo uya kufumana isampulu yokubuyiselwa kweendleko emva koku-odola iphedi yokuqinisekisa.
Q8. Ulibeka njani ixabiso lemveliso yakho?
A: Ewe, simisela ixabiso ngokweemfuno zakho zemveliso, ezinje ngobungakanani, izinto eziphathekayo, ukupakishwa.Sixelele isicelo sakho semveliso, siya kuba sisihlandlo sokuqala ukukunika elona xabiso lifanelekileyo.